ဘုံဘေမြို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်သည့်အပြင် စီးပွားရေး အချက်အခြာကျသော မြို့လည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေး အများဆုံးသောမြို့ကြီးများ စရင်တွင်လည်းပါဝင်လေသည်။ ရှေးယခင်က ဂုဂျာရတ်ပြည်နယ်အတွင်း ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း၊ မာရသီ ဘာသာစကား ပြောဆိုသော မြို့ဖြစ်ရကား မဟာရဋ္ဌပြည်နယ်အတွင်း ပါဝင်ခဲ့လေသည်။ အိန္ဒိယအနောက်ကမ်းရိုးတမ်းပေါ်ဝယ် ကျွန်း (၇) ခုကို စုစည်း မြို့တည်ရာမှသည်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး မြို့တော်အဖြစ် ရောက်ရှိလာသော ဘုံဘေသမိုင်းကို ပြောရလျှင် ရှည်လျှာထွေးပြာလွန်တော့သည်။ ကျောက်ခေတ်ကာလကတည်းကပင် လူသားတို့ စတင်အခြေချခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း မာရသီတံငါးသည်များကိုသာ ကျွန်းပေါ်ဝယ် အစအဦး ဓါးမဦးချသူများဟူ သတ်မှတ်ကြလေသည်။
ဘုံဘေမြို့သည် မောရိယခေတ် အစ္စလမ်ခေတ် ပေါတီဂီ ဗြီတိသျှ အစရှိသော ခေတ်အဆက်ဆက်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ 1st century BCE ကတည်းကပင် ဘုံဘေမြို နလစောပရ “Nala Sopara” (ဗာဟိရဒါရုစရိယမထေရ် ရေမျှောကမ်းတင်ရာ) ဆိပ်ကမ်းသည် ရောမအင်ပါယာနှင့် ကူသန်းရောင်ဝယ်ရာ အဓိက ဆိပ်ကမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေသည်။
3rd century BCE, အချိန်က မောရိယအင်ပါယာလက်အောက် ရောက်ရှိစဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဝါဒများ ထွန်းကားရာ အဓိက နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ (မြို့တော်မှာ ပါဋလိပုတ် ဖြစ်သည်) လည်းကောင်း သုံးရာစု အလယ်ပိုင်းနှစ်များတွင် ကန်ဟာရီ “Kanheri Caves” လှိုင်ဂူကြီးများကို ဖန်တီးကာ (ယခုဘုံဘေမြို့အလယ် တောအုပ်အတွင်း) ဗုဒ္ဓရဟန်းတော်များ၊ စာပေပညာရှင်းများဖြင့် အထူးစည်ကားခဲ့လေသည်။
185 BCE ခန့်တွင် မောရိယ အင်ပါယာဇာတ်သိမ်းပြီးနောက်၊ သတ္တဝါဟနအင်ပါယာ “Satavahanas” အောက်ကြရောက်ပြီး၊ လည်းကောင်းမင်းဆက်များ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ကြပြန်သည်။ (မြို့တော်မှာ အန္တရာပရာဒေရ်ှစ် ပြည်နယ်မှ အမရဝတီ နှင့် ယခု ပူနေးမြို့အနီးမှ ဂျူနားမြို့ တို့ဖြစ်သည်)။ လည်းကောင်းမင်းဆက်များသည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာတို့ကို ချီးမြှောက် ထောက်ပံ့ခဲ့လေသည်။
သတ္တဝါဟန ခေတ် ကုန်ဆုံးချိန် 250 CE မှသည် နောက်ပိုင်းကာလများတွင် အမျိုးမျိုးသော ဟိန္ဒူမင်းဆက်များ အုပ်ချုပ်ကြပြန်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည်လည်း၊ လည်းကောင်း သတ္တဝါဟန မင်းဆက်များနှင့်အတူ ပျောက်ဆုံးခဲ့လေသည်။ ဗုဒ္ဓလိုင်ဂူများအတွင်းမှ စေတီ (ထူပ) များကိုလည်း သျီဝလိင်္ဂ (ဟိန္ဒူတို့၏နတ်ဘုရား) အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ကြလေသည်။ (သဗ္ဗေသင်္ခါရာ အနိစ္စာ ဟု နှလုံးသွင်းယုံမှတပါး အခြားမရှိပါလေ)
ဟိန္ဒူမင်းဆက်တို့ကျဆုံးချိန် ၁၃၄၈ မှသည် ၁၅၃၄ အထိ) နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ နီးပါး ဂုဂျာရတ် မွတ်စလင် ဘုရင်များလက်အောက်၊ ၁၅၃၄ ခုနှင်တွင် ပေါ်တူဂီ လက်အောက် ရောက်ရှိပြီး၊ စက်ရုံများ တည်ဆောက်လေသည်။ ထို့အပြင် စပိန်၊ ဒါခ်ျ၊ အင်္ဂလိပ် ကုန်သည်များ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။ ၁၆၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ပေါတူဂီနှင့် အင်္ဂလန်တို့ ဘုံဘေပိုင်ဆိုင်ရေးအတွက် စစ်ပွဲအကြီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၆၅၉ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တပ်များ ဘုံဘေကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် အခြားသော အဟာရဋ္ဌပြည်နယ် အစိတ်အပို်င်းတို့ကို သျှီဝကြီးဘုရင်က မွတ်စလင်ဘုရင်များကို တိုက်ထုပ် အုပ်ချုပ်ခါ၊ တန်ခိုးထွာလျက် ရှိလေသည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် အင်္ဂလိပ်တို့က အိန္ဒိယ တနိုင်ငံလုံးကိုပင် အုပ်ချုပ်သွားလေသည်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တွင် ဘုံဘေမြို့သည် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များ၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ၊ မီးရထား ကားလမ်းကြီးများဖြင့် အထူး စည်ပင်တိုးတက်ခဲ့လေသည်။
 Bombay Island, Parel, Mazagaon, Mahim, Colaba,Worli, & Old Woman's Island
Posted by SITAGU MDY at 1:23 AM No comments: ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်-->>
၂။ မဟာရဋ္ဌနိဒါန်း (ရှေးဟောင် ဗုဒ္ဓကျောက်လှိုင်ဂူများ ရှိရာမြေ)
၂။ အသောကမင်းကြီးနှင့် မဟာရဋ္ဌ
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ မဟာရဋ္ဌဟူသောအမည်သည် အသောကမင်းတရာကြီး၏ ကိုးတိုင်းကိုးဌာန သာသနာပြု စေလွတ်စဉ်ကတည်းကပင် တည်ရှိလေသည်။ (မဟာ=ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော+ရဋ္ဌ=တိုင်းနိုင်ငံ) ထိုစဉ်ကတည်းကပင် အခြားသော တိုင်ငံများထက် အစစအရာရာ သာလွန်ကြီးမြတ်သောကြောင် မဟာရဋ္ဌ ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမည်။
အရှင်မဟာမောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿမထေရ်မြတ်သည် အသောကမင်းကြီး၏ ပစ္စည်းလေးပါး အထောက်အပံ့တို့ကိုခံယူလျှက်၊ တတိယသံဂါယနာတင်တော်မူခြင်းဖြင့် မိစ္ဆာဝါဒဘေး စသော သာသနာ့ အညစ်အကြေးတို့ကို သုတ်သင် တော်မူပြီးနောက်၊ အနာဂါတ်သာသနာအရေးကို မြှော်တွေးတော်မူလျက် အခြားသော တိုင်းဒေသတို့၌လည်း သာသနာတော်ထွန်းကား တည်တံ့မည်ကို အနာဂတံသဉာဏ်ဖြင့် သိတော်မူသောကြောင့်၊ သီလ သမာဓိ ပညာ ခိုင်မြဲကုန်သော ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ သမဏ အာဇာနည်းများကိုရွေးချယ်လျက် ကိုးဌာနသို့ သာသနာပြု စေလွတ်ခဲ့လေသည်။
၁။ မဇ္ဈန္တိကမထေရ်ဦးဆောင်သော ထေရဝါဒသာသနာပြုအဖွဲ့သည် ကသ္မိရဂန္ဓာရအရပ် (ယခု ယေဘုံယအားဖြင့် ပါကစ္စတန်၊ အာဖဂန်) သို့ကြွရောက်ခါ၊ အာသိဝိသောပမသုတ်ကို အစအဦးဟောကြားလျက်လည်းကောင်း။
၂။ မဟာရေဝတ ဦးဆောင်သော သာသနာပြုအဖွဲ့သည် မဟိ့သကမဏ္ဍလ (ယခု ယေဘုံယအားဖြင့် တပ်မီးနဒူပြည်နယ် "Tamil Nadu State" အရပ်သို့ ကြွရောက်ခါ ဒေဝဒူတ သုတ်ကို အစအဦးဟောကြားလျှက်လည်းကောင်း၊
၃။ ရက္ခိတမထေရ်မြတ်သည် ဝနဝါသီအရပ် (ယခု ယေဘူယအားဖြင့် ကာနတ္တက ပြည်နယ် "Karnataka" သို့ကြွချီတော်မူလျှက် အနမတဂ္ဂ ပရိယာယကထာကို ဟောကြားတော်မူခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၄။ ယောနကဓမ္မရက္ခိတမထေရ်အမူးရှိသော သမဏအာဇာနည်းတို့သည် အပရန္တအရပ် (ယခု ယေဘုံယအားဖြင့် ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ် "Gujarat" ဘုံဘေ နာစစ် အောရန်ဂဘတ်) သို့ကြွချီကာ အဂ္ဂိက္ခန္ဓုပမာသုတ္တန်ကိုဦးစွာ ဟောကြားလျက်လည်းကောင်း။
၅။ မဟာဓမ္မရက္ခိတ မထေရ်အမူးရှိသော သာသနာပြု ရဟန်းတော်များသည် မဟာရဋ္ဌအရပ် (ယခုအခါ ယေဘုံယအားဖြင့် ပူနေး သတရ၊ ကောဟပူ တဝိုက်) သို့ကြွရောက်ခါ မဟာနာရဒ ကဿပဇာတ်တော်ကို ဟောကြားတော်လျက်လည်းကောင်း ၊
၆။ မဟာရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်သော သာသနာပြု အဖွဲ့သည် ယောနကအရပ် (ယခုအခါ ဂရိတ် တူရကီ အီရတ် အီရန်) သို့ကြွချီကာ ကာဠကာရာမသုတ်ကို အစအဦးဟောကြားလျက် လည်းကောင်း၊
၇။ မဇ္ဈိမ မထေရ်၊ ဦးဆောင်သော ထေရဝါဒသာသနာပြုအဖွဲ့သည် ဟိမာဝန္တာအရပ် (ယခု ယေဘူယအားဖြင့် နီပေါ တိဗက် ဘူတန်) သို့ကြွရောက်ပြီး၊ ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ်ကို အစအဦးဟောကြားလျက်လည်းကောင်း။
၈။ သောဏမထေရ်၊ ဥတ္တရမထေရ် ဦးဆောင်သော ထေရဝါဒ သာသနာပြုအဖွဲ့သည် သုဝဏ္ဏဘူမိအရပ် (ယခု မြန်မာ ထိုင်း မလေး အင်ဒို) သို့ကြွရောက်ခါ ဗြဟ္မဇာလသုတ်ကို အစအဦး ဟောကြားလျက်လည်းကောင်း။
၉ ။ အရှင်မဟိန္ဒမထေရ် ဦးဆောင်သော သာသနာပြုအဖွဲ့သည် သီဟိုရ်ကျွန်းသို့ကြွရောက်ခါ၊ စူဠဟတ္ထိပဒေါပမာသုတ်ကို အစအဦးဟောကြားလျက်လည်းကောင်း အသီးသီး သာသနာပြုကြလေသည်။
((ထိုသို့သာသနာပြုကြွရာဝယ် အနည်းဆုံး ၅ပါး သို့မဟုတ် အပါး ၂၀ (သံဃကံကြီး ကံငယ် ဥပုသ် ပဝါရဏာ စသည် ပြုလုပ်နိုင်ရန်) ပါဝင်ကြသည်ဟု ပညာရှိ ဆရာတော်များ ယူဆ သုံးသပ်ကြလေသည် ထိုကြောင့် မထေရ်ဦးဆောင်သောဟုလည်းကောင်း။ ထိုပြင် အသောမင်းကြီး၏ ထေရဝါဒသာသနာပြု မစေလွတ်ခင်၊ ရှေးယခင်ကတည်းက မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတို့ ရောက်ရှိနေဟန် သမိုင်းအထောက်အထားတို့များစွားတွေ့ရလေသည်။ ထိုကြောင် ထေရဝါဒ သာသနာပြုအဖွဲ့ဟုလည်းကောင်း မှတ်တမ်းတင်ရလေသည်။ ))
ထိုစဉ်ကတည်းက မဟာရဋ္ဌအရပ်သည် အသောကမင်းကြီး၏ မောရိယ အင်ပါယာ အာဏာစက်အတွင်းကြရောက်သော ဒေသဖြစ်လေသည်။
သာဓက ပမာပြရလျင် ဘုံဘေမြို့ ဗာဟိယဒါရုစရိယ မထေရ် ရေမျှော ကမ်းတင်ရာ သုပ္ဗတိထ္ထဆိပ်ကမ်းအရပ်ဝယ် စေတီပျက် အုဌ်ပုံကြီးများရှိသည်၊ တစ်ချို့သော အိန္ဒိယသားတို့က ဗာဟိယဒါရုစရိယ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အသောကမင်းကြီးက စေတီတည်ခဲ့သော နေရာဟုပြောကြသည်၊ တချို့သော သူတို့ကား၊ ရှင်မဟာဓမ္မရက္ခိတ မထေရ် မဟာရဋ္ဌဒေသတွင် တရားဦးဟောရာနေရာအဖြစ် အထိမ်းအမှတ်တည်ထားသော စေတီဟု ယူဆကြလေသည်။
လက်ရှိမဟာရဋ္ဌပြည်နယ်ဖြင့် နိုင်ယှဉ်ကြည့်ပါက ဝနဝါသီအရပ်နှင့် အပရန္တအရပ်တို့သည်လည်း မဟာရဋ္ဌအတွင်း တစိတ်တဒေသ ပါဝင်နေသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုကြောင် မဟာရဋ္ဌဟူသည် အသောကမင်းကြီး၏ သာသနာပြု စေလွတ်ရာ သုံးဌာနတို့နှင့် ဆက်စပ် ပတ်သက်နေသောကြောင်း "မဟာရဋ္ဌ" တိုင်းကြီးမဟာ ဟူသတည်း။။
ကျမ်းကိုး - ဗုဒ္ဓနိုင်ငံတော် (အရှင်သံဝရာဘိဝံသ) တိနိအဖွဲ့ ၁၉ ၉ ၁
Posted by SITAGU MDY at 8:46 AM No comments: ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်-->>
၁။ မဟာရဋ္ဌ နိဒါန်း။ (ရှေးဟောင် ဗုဒ္ဓကျောက်လှိုင်ဂူများ ရှိရာမြေ)
လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၃၀၀ နီးပါးနေထိုင်ကြပြီး
ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယ လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အရာဝတ္ထုများ၊ အမျိုးမျိုးသော ဘာသာစကား စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများ၊ နှစ်ပေါင်းထောင်သောင်းကျော် သက်တမ်းရှိ အဆောက်အဦးကြီးများ၊ ရှေးအိန္ဒိယ ဘာသာရေးကျောက်လှိုင်ဂူကြီးများ၊ နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်စသည့်နယ်ပယ် အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ စသည်ဖြင့် များစွာပြည့်နှက်လျက်ရှိပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သာမက၊ ဂျိန်းဘာသာဝင်တို့၏ မဟာဝီရများ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ နတ်ဘုရားများ၊ ပန်ချာပီလူမျိုးတို့၏ ဂုရုကြီးများ၊ အခြားသော ဘာသာများစွာ၏ နတ်ဘုရားများ ပေါ်ပေါက်ရာဖြစ်၍ လေ့လာသင့်သော နေရာဒေသများမှာလည်း အများအပြားပင်ရှိလေသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ပြည်နယ်ပေါင်း ၂၉-ပြည်နယ်ရှိပြီး စတုရန်းကီလိုမီတာ ၃.၂၉ သန်းမျှကျယ်ဝန်းပါသည်။ မြောက်မှ တောင်သို့ ၃. ၂၁၄ ကီလိုမီတာ ရှိပြီး အရှေ့မှ အနောက်သို့ ၂.၉၃၃ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသည်။ ထိုပြည်နယ် အသီးသီးတွင် မဟာရဋ္ဌပြည်နယ်သည်, (Maharashtra-state) ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကျောက်လှိုင်ဂူကြီးများ အများအပြားတည်ရှိသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လည်ပတ်လေ့လာသင့်သော ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မဟာရဋ္ဌပြည်နယ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ (Uttara-prade) UPပြည်နယ်ပြီးလျင် ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံး ပြည်နယ်လည်းဖြစ်သည်။ ဧရိယာအားဖြင့် သုံးခုမြောက် အကျယ်ဆုံးပြည်နယ် ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း အများအပြား တည်ရှိသောကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ အနောက်ဘက်တွင် (Arabian-sea) အာရဗီယား ပင်လယ်နှင့် (Gujarat-state) ဂုဂျရတ်ပြည်နယ်။ မြောက်ဘက်တွင် (Madhya-Pradesh) MP, ပြည်နယ်၊ အရှေဘက်တွင် (Chhattisgara) ချတ္တိစဂတ်ပြည်နယ်၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် (Andhra-Pradesh) AP ပြည်နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် (Karnataka-state) ကာနတကပြည်နယ် နှင့် ကမ္ဘာကျော်ဂေါယာကမ်းခြေရှိရာ (Goa-state) ဂိုအာပြည်နယ် တို့ တည်ရှိလေသည်။ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း ၃၀၇၇၃၁ ရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံအကျယ်အဝန်း၏ ၉ .၈၄ ရာခိုင်နုန်းကျယ်ဝန်းသည်။ မဟာရဋ္ဌ၏ မြို့တော် ဘုံဘေ (Mumbai) မွန်ဘိုင်း သည် အန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး၊ စီးပွားရေမြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။ ၁၆ ရာစု၊ ဘုရင်သျှီဝကြီးဘုရင် လက်ထက်တွင် မဟာရဋ္ဌပြည်နယ်သည် အိန္ဒိယ အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကို စိုးမိုးထားသော မူဂါယ်တို့ကို (Mughals) (မူစလင်ဘုရင်များ) တိုက်ထုပ်ချိန်မှ စတင်ခဲ့လေသည်။ ၁၇၆၀ ခုနှစ်တွင် မဟာရဋ္ဌအင်ပါယာသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သုံးပုံ တစ်ပုံခန့်မျှ ကျယ်ဝန်းခဲ့လေရာ ဒုတိယ အသောက အင်ပါယာဟု ခေါ်နိုင်လေသည်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိချိန်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ဘာသာစကားတူရာတူရာ ပြည်နယ်များကွဲပြားသွားလေသည်။ နာဂပူမြို့သည် ထိုအချိန်က မဒ္ဒရာပရာဒေရ်ှစ် MP ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် မာရသီဘာသာစကားကို အသုံးအနှုံးများသောကြောင့် မဟာရဋ္ဌအတွင်း ပေါင်းစည်းခဲ့လေသည်။ မြန်မာ့နောက်ဆုံးမင်းဆက် သီပေါဘုရင်၏ အကျဉ်စံ နန်းတော် Ratanagira, ရတနာဂီရိသည်လည်း မဟာရဋ္ဌမာပင် တည်ရှိသည်။ ထင်ရှားသော မြို့ကြီးများမှာ ဘုံဘေ,Mumbai၊ နာဆစ်Nashik,၊ နာဂပူNagpur,၊ ပူနေး၊ အော်ရမ်ဂဘတ် Aurangabad၊ နန္ဒိNanded,၊ စောလပူ Solapur, စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ရှေးယခင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အိန္ဒိယ မဟာလူသားတို့၏ သတ္တိ စွမ်းပကာ ညာဏ်ပညာ သဒ္ဓါတရားတို့ပြသရာ၊ ကြီးကျယ် ခန်းနားသော ရှေးဟောင်း အနုပညာလက်ရာ လှိုင်ဂူကြီးများ တည်ရှိရာ၊ မဟမဟာ အရပ်ဒေသကို မဟာရဋ္ဌ (တိုင်းကြီးမဟာ) ဟုခေါ်တွင်လေသည်။
- - - - -x -------- x--- -- --
ဆန်ချီ သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီ
သီရိဓမ္မာ အသောကရာဇာမင်းကြီးကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း၊ သမိုင်ပညာရှင်ေတိုင်း သိကြသည်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်တွင် စေတီတော်ပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်း တည်းထား ကိုးကွယ် လှူဒါန်းခဲ့သူဟုလည်း လူသိများသည်။ မင်းကြီး လှူဒါန်းခဲ့သော စေတီတို့တွင် လက်ရှိထင်းရှား လူသိများသည် တစ်ဆူတည်းသော စေတီမာ ဆန်ချီစေတီ (သန္တိထူပ၊သျှန္တိထူပ) ငြိမ်းချမ်းရေး စေတီပင်ဖြစ်ပါသည်။
လည်းကောင်းငြိမ်းချမ်းရေးစေတီသည် အိန္ဒိယပြည်၊ အလယ်ပိုင်းပြည်နယ် (Madhya Phadesh) အတွင်း ဘိုပါလ်းမြို့မှ (၄၆) ကီလိုမီတာ၊ ဝေဒိသမြို့မှ (၁၀) ကီလိုမီတာဝေးသောအရပ်တွင် တည်ရှိသည်။ စေတီကုန်းတော်မှ ဘေးဝဲယာတို့တွင် စိမ်းမြမြလယ်ကွင်းပြင်ကြီး ကာရံထားသည် ထိုလယ်ကွင်းတို့အဆုံးဝယ် ညိုညိုမှိုင်းမှိင်း တောင်တန်းကြီးများက တံတိုင်းကြီးများသဖွယ် ကာရံထားပြန်သည်။ ထိုစေတီကို အကြောင်းပြုကာ အနီးတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရွာကလေးကိုလည်း ဆန်ချီရွာ သို့မဟုတ် (သန္တိနဂရ၊ သျှန္တိနဂါး) ငြိမ်းချမ်းရေးရွာဟု ခေါ်ကြပြန်သည်။ မဟာရဋ္ဌပြည် ပူနေးတောရမှ သွားပါမူ ရထားဖြင့် (၁၈)နာရီ ခရီးဖြစ်ပါသည်။ (၁၀ ၁၂ ၂၀၁၅) ရက်နေ့ ပူနေးတောရ ဒကာဒကမ ခြောက်ဆယ်ခန့်ဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစေတီရှိရာသို့ စိတ်အစဉ်တို့ ရောက်ရှိနေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပင် ကျော်ခဲ့လေပြီ။ စစ်ကိုင်းသီတဂူဝယ် ကျောင်းတက်စဉ်ကတည်းက ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆောင်ကြီးကို ဆန်ချီစေတီပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ထားသည်ဟု အဓိပတိဆရာတော်ကြီးမှ မကြာခဏပြောပြဘူးသည်။ ဆန်ချီစေတီ၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်မှာ စစ်ကိုင်းသီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဆောင်ကြီးကဲ့သို့ပင်တည်း။
ထိုငြိမ်းချမ်းရေး သန္တိစေတီတော်ကြီးသည် မောရိယခေတ်၊ သုန်ကခေတ်၊ သတ္တဝါဟနခေတ်၊ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်၊ စသော ခေတ်ကာလများစွာကိုကျော်ဖြတ်ကာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်သို့ပင် ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။ မောရိယခေတ်အကုန် သုန်ကခေတ်မင်းဆက်တို့မှ စေတီတော်ကြီးနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး လျှစ်လှူရှု ခံခဲ့ရသည်ကြောင့် အသောက မင်းကြီးလှူဒါန်းခဲ့သော မူလစေတီတော်ကြီးမှာ မြေခခဲ့ရသည်။
အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်သော ခေတ်ကာလသို့ရောက်သည့်အချိန် ၁၈၈၁ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အရာရှိ “General Taylor” မှ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းဘို့ စတင်ခဲ့လေသည်။ မူလစေတီတော်ကြီး ပျက်စီးခဲ့သော်လည်း စေတီ၏ ပတ်လည်းတွင် စေတီငယ်နှစ်ဆူ၊ တောင်ခြေအရပ်တွင် စေတီငယ်တစ်ဆူကျန်ရှိခဲ့သည်။ ထိုစေတီငယ်တို့၏ ပုံစံအတိုင်း (၁၉ ၁၂ ခုနှစ်မှ ၁၉ ၁၉ ခုနှစ်အထိ) “Sir John Marshall” ဆိုသူက လက်ရှိအခြေအနေ ရောက်သည်အထိဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ၁၉ ၈၉ ခုနှစ်တွင် “UNESCO World Heritage” ကမ္ဘာ့အမွေအနစ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
ငယ်စဉ်က ဆရာသမားများ မကြာခဏ ပြောပြခဲ့သော ဆန်ချီသမိုင်းကို ပြောပြချင်ပါသည်။ တတိယ သံဃာယနာတင် ပွဲတော်ကြီးပြီးချိန်ဝယ် ရှင်မဟာမောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿမထေရ်မြတ်၏ လမ်းညွန်ပြသ ဆိုဆုံးမမူတို့ဖြင့်၊ သိရီဓမ္မာ အသောက မင်းကြီးသည် သုဝဏ္ဏဘူမိခေါ် သထုံပြည် အပါအဝင်၊ (၉) ပြည်ထောင်သို့ ဗုဒ္ဓ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး မဂ္ဂင်ရှစ်ရပ် အကျင့်မြတ်လမ်စဉ်တို့ ပြန့်ပွားဘို့ရန် သာသနာပြု စေလွတ်ခဲ့လေသည်။ ထို (၉) ပြည်ထောင်တွင် သီဟိုရ်ကျွန်းသို့ သာသနာပြု သွားရန် တာဝန်ကျသည့် မထေရ်သည်ကား၊ အသောကမင်းကြီး၏ သားတော် မဟိန္ဒမထေရ်မြတ်ဖြစ်ပါသည်။ မထေရ်မြတ်သည် ပေးအပ်သော တာဝန်ကို လက်ခံခဲ့သော်လည်း သီဟိုရ်ကျွန်းသို့ တိုက်ရိုက်မသွားခဲ့ပေ။ ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွား၊ ဖဝါးလက်နှစ်လုံး၊ ပခုံး လက်နှစ်သစ်၊ ဝါးဖတ်တော် ခဆီနှစ်နှင့် လူဖြစ်အောင် မွေးခဲ့သည် ကျေးဇူးရှင်မိခင်းကြီးရှိရာ ဝေဒိသျှ အရပ်သို့သာ ကြွမြန်းခဲ့လေသည်။
ရှင်မဟိန္ဒ၏ မယ်တော် ဒေဝီမိဘုရားသည် ဥဇ္ဖေနီမြို့အနီး ဝေဒိသျှနိဂုံးမှ ရွာသူကြီး၏ သမီးဖြစ်သည်။ အသောက မင်းကြီး၏ မိဘုရားခေါင်းကြီး မဖြစ်နိုင်ပေ။ အရာမက များစွာသော မိဘုရားတို့ကြားဝယ် တောသူ မိဘုရားငယ်တစ်ပါးမျှသာ ဖြစ်နိုင်လေသည်။ သားတော် သမီးတော်များ ရှင်ရဟန်းပြုသွားစဉ်ကတည်းက နေပြည်တော် ပါဋလိပုတ်နန်းတော်တွင်မနေဘဲ၊ မွေးရပ်မြေဖြစ်သော ဝေဒိသျှတွင်သာ နေထိုင်ခဲ့လေသည်။ ဒေဝီမိဘုရားအတွက် သားတော် မဟိန္ဒသည် အင်းအားဖြစ်သည့်အပြင်၊ အသက်ရှင်သန်ခြင်း၏ အကြောင်းလည်းဖြစ်လေသည်။
((အမေ့အိမ် အပြန်လမ်းဝယ် တာဝန်နှင့် ကျေးဇူးတရားတို့ အားပြိုင်ကြ))
ဝေဒိသျှသို့ ရောက်ပါပြီ။ မိခင်ကြီး ဒေဝီ နှင့် အဘိုးအဘွား ဆွေတော်မျိုးတော်များ ကြိုဆိုနေကြစဉ်၊ ရေခြားမြေခြား တိုင်းတစ်ပါးသို့ သွားရောက်မည့်အကြောင်းကို မိခင်းကြီးအား ပြောပြသည့်အခါဝယ် - - -
“သားတော် လူလေး မေ့ရွှေသွေး - - တစ်မြေတည်နေ တစ်ရေတည် သောက်စဉ်သော်မှ မယ်တော်သည် သားတော်အား တစ်လတစ်ကြိမ် ဖူးတွေ့ခွင့်ကို မရခဲ့၊ တိုင်းကြီးရပ်ခြား ထွက်ခွါသွားပါမူ အတီမှာ တွေ့ခွင့် ဆုံခွင့် ဖူးတွေ့ခွင့်ကို ရပါတော့အံနည်း၊ မယ်ဘုရားအား ပြစ်မသွားပါလင့်၊ သားခမည်းတော်၏ မောရိယ အင်ပါယာကြီးအတွင်းသာလျှင် သီတင်းသုံးတော်မူပါ၊ အတီမျှ မသွားပါလင့်”။ ((( စာချဆရာ အာရွှမ်းဖောက်၍ ဟာသမြှောက်အောင်ပြောခဲ့သည်ကား တိုင်းတစ်ပါးတွင် သာသနာပြုမည်ဟုဆိုသော်လည်း “သာသနာပြု ဒေါ်လာစု လူမူအဖြာဖြာ” ဟူသော ရှေးဆတော် သမားတော်တို့၏ စကားအရ သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွင် ဒေါ်လာကုန်က သားတော်ဒုက္ခရောက်ပေတောမည်။ ဒီမိုကရေစီအရေး သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြရ၊ သာရေးနာရေး လူမူရေးတို့ဖြင့် သားတော်ပင်ပန်းပေတော့မည်။))) မေ့ထံပါးက တစ်ဖဝါးမခွါပါလင့် သားတော်” ဒေဝီ မယ်တော်ကြီးသည် သားတော်၏ အပြန်လမ်းမှာ သောက ရွှေမိုးတို့ ရွာခဲ့လေပြီတည်း။
“သုံးလောကထွဋ်ထား မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်ဝယ် ရဟန်းတော်များသည် လူအများတို့ အံ့သြကြစေရန်၊ လူအများက ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ဖိတ်ကြားစေရန်၊ လာဘ ပူဇော်သက္ကာရ အကျော်အစော်ဟူသော အကျိုးတို့ကို ရည်မြော်ကိုးသဖြင့် မြတ်သော မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်တရားကို ကျင့်သုံးနေသည်မဟုတ်ပါ မယ်တော်ကြီး၊ နှစ်ရာ့နှစ်ဆယ် ခုနှစ်သွယ်သော သိက္ခာပုဒ်တို့ကို မပျောက်မကြားရအောင် စောင့်ထိမ်းလျက် ဒူတနှစ်ပါးကိုကျင့်သုံးနေခြင်းကြောင့် ငါ့အား လူအများတို့ သိစေသတည်းဟုလည်း နှလုံးမသွင်းခဲ့ကြပါ၊ ကာယစသော ဒုစရိုက် တို့မှ စောင့်စည်းရန်၊ ထိုထိုသို့သော ဒုစရိုက်တို့ကို တဒင်္ဂပဟန်စသည်ဖြင့် ပယ်ရန်သာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်မြတ်တရားကို အားထုပ်နေကြပါသည် မယ်တော်“ အစရှိသည်ဖြင့် မဟိန္ဒမထေရ် မယ်တော်ကြီး အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအကောင်းတို့ဖြင့် တရာဟောခဲ့လေသည်။
“မသိ နားမလည်ခြင်း မောဟ၊ လိုခြင်တပ်မက်ခြင်း လောဘကို မပယ်သတ်နိုင်သမျှကာလ ပတ်လုံး၊ သေဆုံးပြီးနောက် ဘဝအသစ်တဖန် အမိဝမ်းဝယ် ပဋိသန္ဓေနေရမည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် နောက်တစ်ဖန် အိုရ နာရ သေပြန်ရဘို့ အကြောင်းသာလျှင်ဖြစ်တော့သည်။ သံသရာမှာ ကျင်လည်သည့် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ၏ အရိုးတို့ကို စုပုံထားခဲ့ပါမူ၊ ထိုအရိုးတို့သည်လည်း မဆွေးမမြေ့ အမြဲတည်ခဲ့ပါမူ၊ ထိုအရိုးစု အရိုးပုံကြီးသည် ဝေပုလ္လတောင်ကြီးထက်ပင်များပေမည်” ဟု ဘုရားရှင်ဟောခဲ့ဘူးပါသည် မယ်တော်။
ရွှေဘုန်းတော်သခင် ဘုရားရှင်သည် နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော တစ်ဘက်ကမ်းသို့ ရောက်စေတတ်သော မျက်မှောက် မျက်ကွယ် ဘေးရန်မရှိသော၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်မြတ်တရားကို ကာယဒုစရိက်စသည်မှ စောင့်စည်းရန်၊ ကာယဒုစရိုက်စသည်ကို တဒင်္ဂပဟာန်စသည်ဖြင့် ပယ်နိုင်ရန် ဟောကြားခဲ့ပါသည် မယ်တော်။
ထိုမဂ္ဂင်ရှစ်ဖြာ လမ်းမြတ်မဟာသည် မွန်မြတ်သော စိတ်ရှိကုန်သော ဘုရားအစရှိသော သူတော်ကောင်းတို့၏၊ လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို မဂ္ဂင်တရားကိုကျင့်သုံးသူတို့သည် အိုနာသေ ဆင်းရဲတို့ကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြရပါသည် မယ်တော်”။။
မည်သို့ပင်တရားပြ ဆုံးမသော်လည်း မယ်တော်ကြီးဒေဝီသည် ဆက်လက်ငိုကြွေး လျောက်ထားပြန်သည်။ “မိဖဖိုးဖွားတို့၏ သားသမီးတို့အပေါ်ဝယ် ဖြစ်ပွားသော ချစ်မေတ္တာသည် အပေါ်ယံ အရေပါးကိုလည်းကောင်း ထို၏အတွင်း အရေထူကိုလည်းကောင်း အသားကိုလည်းကောင်း၊ အကြောကိုလည်းကောင်း၊ အရိုးကိုလည်းကောင်း အစဉ်သဖြင့် ဖြတ်ပြီးလျှင် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီသို့ ခိုက်လျှက် တည်ရှိပါသည်။ သားတော် ရှင်ရဟန်းပြုသွားသောအခါဝယ် မယ်မယ်အား ဆင်းရဲဒုက္ခ ဂဏန်းမပြနိုင်အောင် များစွာပင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်၊ သားတော် အတီမျှ မသွားပါလင့်၊ ဖခမည်းတော် မောရိယအင်ပါယာအတွင်းသာလျင် သီတင်းသုံးတော်မူပါ”။
မဟိန္ဒမထေရ်၏ အတွေးစဉ်ဝယ် တာဝန်နှင့် ကျေးဇူးတရားတို့ အားပြိုင်ကြလေပြီး၊ ဆရာသခင်တို့ ပေးအပ်သော သီဟိုရ်ပြည်သို့ သာသနာပြုသွားရောက်ရန် ကြီးလေးသော တာဝန်ကိုလည်း လက်ခံပြီးခဲ့လေပြီး။ ယခုအခါ မယ်တော်မှ မသွားဘို့ရန် တောင်ပန်းနေခြေပြီး။ မယ်တော်ကြီး၏ တောင်ပန်ချက်ကို ငြင်းပယ်ဘို့ရန် ရှင်မဟိန္ဒအဘို့ အင်အားလည်း မရှိခဲ့။ တုံဏီဘာဝေဖြစ်နေသော သားတော်၏ မျက်နာတော်အား စိုက်ကြည့်ပြီးလျှက်၊ မယ်တော်က ဆက်ပြီးလျောက်တင်ပြန်သည်။
“မယ့်မယ်ချစ်သွေး သားတော်လေး၊ ယခုအခါ မုတ်သုံလေတစ်ရေးနိုး မိုးဦးကျတောမည့် အချိန်ဖြစ်ပေသည်၊ ပင်လယ်လမ်းခရီးဝယ် လှိုင်းတံပိုးတို့သည်လည်း အလွန်ပင် ကြမ်းတမ်းလှ၏၊ သီဟိုရ်ပြည်သို့ သွားရန် အခါမသင့်တော့ပေ၊ မိုးလေ ကင်းလွတ် သီတင်းကျွန်ချိန်မှသာ ကြွတော်မူပါ၊ သားတော်ကို အစအဦး အမှူးပြုကာ ကြွလာသမျှသော ရဟန်းတို့ကို မယ်တော်နေအိမ်သို့ ပင့်ဖိတ် ဆွမ်းကျွေးခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ၊ ဝတ်စုံသင်္ကန်းလှူဒါန်းနိုင်ခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ၊ ကျောင်းဆောက်လှူဒါန်းခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ” ဤသို့ စသည်ဖြင့် ငိုကြွေးလျောက်ထားရှာလေသည်။
မထေရ်မြတ်လည်း ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြင့် ဝါတွင်းသုံးလ သီတင်းသုံးရန်အတွက်ကို လက္ခံခဲ့လေသည်။ သီဟိုရ်သွားရန် အကြောင်းကို စွန့်လွတ်ဘို့ကား မဖြစ်နိုင်ပေ။ မိခင်၏ အလို့ဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆီးလိုသော်လည်း၊ ဆရာသခင်တို့၏ ဓမ္မစက်၊ ဖခမည်းတော်၏ အာဏာစက်တို့ကို လွန်ဆန်နိုင်ဘို့ကား အကြောင်းမရှိပါခြေ။
သားတို့၏ အပြစ်ကြီး အပြစ်ငယ်အသွယ်သွယ်ကို သွန်သင်ပြသ ဆိုဆုံးမကြသည် ဆရာဥပဇ္ဈာယ်တို့ အမြဲဆုံးမသည် စကားရှိပါသည် မယ်တော်။
“၁။ ငါ့ရှင်တို့ တစ်တွေဟာ နာမည်ကြီး ဆရာသ္မား၏ တပည့်။ (နာမည်ကြီးဆရာဟူသည် ဗုဒ္ဓ)
၂။ အရှင်တို့ကို ရပ်ရွာနှင့် မိဘဆရာသမား ဆွေမျိုးသားချင်းများက အားကိုးအားထားပြုဘို့ စောင့်ကြိုနေကြတယ်။
၃။ အရှင်တို့ဟာ သာသနာလက်ဆင့်ကမ်း လမ်းညွန်စရာ၊ အားထုပ်စရာတွေ များစွာရှိနေကြတယ်။ ထိုသုံးချက်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါလင့်၊ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဘယ်တော့မှ အပျောက်မခံပါလင့်၊ မပေါ့ဆလင့်။” သည်ဆုံးမစကားတွေကို သားတို့ ရှင်ရဟန်းပြုစဉ်ကတည်းက ကြားနာခဲ့ရပါသည်မယ်တော်။
“ထို့အတွက်ကြောင့် သားတော်ဝယ် သာသနာလက်ဆက်ကမ်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်များရှိပါသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအများ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတို့၏ နှလုံးသာသို့ရောက်ရန်မာ သား၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များကို တစ်လုံးတစ်ပါဒ လေးဘဲဖြစ်ဖြစ် နာကြားရသူတွေဟာ ကံကောင်းလွန်းကြပါသည်၊ သားတော်ဟာ အားလုံးကို ကံကောင်းစေခြင်သူပါမယ်တော်၊ ဝါတွင်းသုံးလ ပတ်လုံး မယ်တော်လှူဒါန်းသောကျောင်းဝယ် သီတင်းသုံးပါမည်၊ ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်ချိန်ဝယ် သားတော်အား သီဟိုရ်သို့ ကြွသွားခွင့်ပေးပါ မယ်တော်”။
ဒေဝီမိဘုရားသည် သားတော်မဟိန္ဒမထေရ်မြတ်အား ကျောင်းတော်ကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းကာ ဆွမ်း သင်္ကန်း ဆေး အစရှိသည်တို့ဖြင့် သာသနာတော်ကြီးကို ထောက်ပံ့ခဲ့လေသည်။ မဟိန္ဒထေရ်အရှင်သည် မိခင်ကြီး လှူဒါန်းသည့်ကျောင်းဝယ် ဝါတွင်းသုံးလ သီတင်းသုံးလျက် ဒါနကထာ၊ သီလကထာ၊ သဂ္ဂကထာ၊ မဂ္ဂကထာတို့ဟောပြောလျက် မိခင်းကြီးအား ကျေးဇူးဆပ်ခဲ့လေသည်။ မိခင်ကြီး စိတ်နှစ်လုံးတို့ ချမ်းမြေ့ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အောင်အောင်မြင်မြင် စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် ကောင်းမူကုသိုလ် ကိုယ်ပိုင်းတရားများ ပွားများ အားထုပ်နိုင်ပါစေခြင်း အကျိုးငှါ ကျောင်တော်ကြီးကိုလည်း၊ သျန္တိမဟာဝိဟာရ ဟု အမည်ပေးခဲ့လေသည်။
မထေရ်မြတ်သည် သံဃာတော်များ ဆွမ်းခံကြွချိန်ဝယ်၊ ကျောင်းစဉ်လှည့်လည်ကာ တံမျှက်စည်းလည်းခြင်း၊ အမှိုက်ကြုံးခြင်း၊ သောက်ရေ သုံးရေ တည်ထားခြင်း၊ ဂိလာနသံဃာတော်များထံ သွားရောက်ခါ အလို့ရှိရာ မှာကြားနိုင်ရန် လျောက်ထားခြင်း၊ အားပေးစကားများ ပြောကြားခြင်း၊ စသည်သံဃာဝေယျာဝစ္စေများကို နေစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။ ရှင်ဘုရင်၏ သားတော်ဖြစ်သော်လည်း စိုးစည်း အနည်းငယ်မျှ မာန်မာနတို့ မရှိခဲ့ခြေ။ “ငါ့အား ဘဝများစွာ သားကျွန်း မယာကျွန်းတို့ ခံရပေါင်းများခဲ့လေပြီ၊ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် လူဘဝရောက်ခိုက် သာသနာ့ကျွန် သံဃာ့ကျွန်သာပြုတော့အံ့” ဟု နေစဉ်နှစ်လုံးသွင်းခဲ့လေသည်။
ကျောင်းတော်ကြီးဝယ် မဟိန္ဒမထေရ် အကြိမ်ကြိမ် ဆန္ဒပြုခဲ့သည်ကား - - - -
“သားသ္မီးကို ချစ်ရသော မိခင်တို့၏ အပူ သောကများ ငြိမ်းပါစေ” (သျန္တိ)။
“သားရှိသောမိခင်၊ မိခင်ရှိသာ သားတို့၏ ချစ်ခြင်းတရား အပြန်အလှန် စီးဆင်းပါစေ” ဟူ၏။
ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်လေပြီ၊ သံဃံဘန္တေပဝါရေမိ ဒိဋ္ဌေနဝါ သုတေနဝါ မရိသင်္ကာယဝါ ဝဒန္တု မံ အာယသ္မန္တော အနုကမ္ဗံ ဥပါဒါယ။ ဒုတိယမ္ဗိ၊ တတိယမ္ဗိ။ “သံဃာတော် အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ်တို့ဘုရား၊ ဘုရားတပည့်တော် လျေက်ထားပါသည် ဘုရားတပည့်တော်၏ မသင့်လျှော်သော ကိုယ်နုတ်အမူအရာတို့ကို မြင်သော်လည်းကောင်း ကြားသော်လည်းကောင်း ယုံမှားသံသယဖြစ်သော်လည်းကောင်း သနားသည်ကိုအကြောင်းပြု ဆိုဆုံးမမှု ပြုတော်မူကြပါဘုရား”။ သန္တိမဟာဝိဟာရကြီးမှ သံဃာတော်များ အချင်းချင်း ဖိတ်မံ လျှောက်ထား ပန်ကြားသံများကို မြင်ယောင်နေပြန်သည်။ သံဃာတော်များ၏ ရိုသားဖြောင့်မတ်ခြင်း သုပ္ဗဋိပန္နဂုဏ်ကို ဖော်ကြူးနေသည့် သံဃာပဝါရဏာပွဲကြီးပြီးဆုံးခဲ့လေပြီး။ ရှင်မဟိန္ဒအဘို့ သည်ပဝါရဏပွဲကြီးသည် အမိမြေဝယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ မထေရ်မြတ်သည် သံဃာတော်များကို ဆွမ်းလုပ်ကြွေးရန် မောင်မမိဿံတို့အား ညွန်းကြားနေသော မယ်တော်ကြီးအား တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ကာ “ချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်ဘိုးထားရသူများနှင့် ကွေ့ကွင်းရခြင်းသာ ဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်သည်မဟုတ်၊ မချစ်မနှစ်သက်သူများနှင့် အတူနေရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲလှပါတယ်၊ သို့သော်လည်း ချစ်ခင် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံခြင်းကား ကွေ့ကွင်းနောက်ဆုံးရှိတော့သည် မယ်တော်” ထိုစကားတို့ကို မထေရ်မြတ်သည် မယ်တော်ကြီးအား ပြောမထွက်ခဲ့ပေ။
ဒေဝီမိဘုရားမှ သားတော် မဟိန္ဒမထေရ်အား ကျောင်းဆောက်လှူဒါန်းသည့် သတင်းကို ကြားသိရသောအခါ၊ အသောက မင်းကြီးသည်လည်း၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓါတ်တော်များ၊ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန၊ ရှင်သာရိပုတြာ စသော အဂ္ဂသာဝက မထေရ်ကြီးများ ဓါတ်တော်များကို ဌာပနာပြုလျက်၊ သားတော် မဟိန္ဒမထေရ် သီတင်းသုံးရာ (သန္တိမဟာဝိဟာရ) ကျောင်း၏ မနီးမဝေးအရပ်တွင် စေတီတည်ထား လှူဒါန်းခဲ့လေသည်
သုံးလောကထွဋ်ထားမြတ်စွာဘုရားနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်တို့ကဲ့သို့ အရိယာ သူတော်စင်များပင် သင်္ခါရနယ်ပယ်မှ မလွတ်နိုင်သေးရကား အနိစ္စလက်နက်ဖြင့် တချက်ခွင်းက ဆုံးပါးခြင်း ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်ကြရကုန်သေး၏၊ ငါ့ကဲ့သို့သော အန္ဓပုထုဇဉ်သည်ကား အဘယ်ဆိုဘွယ်ရာ ရှိတော့အံ့နည်း၊ မုချ သေဆုံးရမည်တည်းဟု သတိသမ္ဗဇဉ်အမြဲယှဉ်ကား “ငါ” တည်းဟူသော မာန်မာနတို့ငြိမ်းပါစေ။ သျှန္တိ။
ချစ်ခင်ရသော သူတို့နှင့် ကွေ့ကွင်းရခြင်း၊ မချစ်မနှစ်သက်သော သူတို့နှင့် ယှဉ်တွဲနေရခြင်း ဒုက္ခများ ငြိမ်းပါစေ။ (သျန္တိ)
စစ်ဘေး စစ်ဒဏ် မင်းဆိုးမင်းညစ်တို့ နိပ်စက်သောဒဏ်စသည်တို့မှ ငြိမ်းပါစေ။ (သန္တိ)
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအပေါင်းတို့သည် ဘုရားရှင်၏ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး လမ်းစဉ်တရားကို ကျင့်သုံးလိုက်နာကြလျက် အိုခြင်း နားခြင်း သေခြင်း၊ တဖန် ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း စသော ဒုက္ခမျိုးတို့မှ ငြိမ်းပါစေ။ (သန္တိ)
အစရှိသော ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့်၊ ငြိမ်းချမ်းရေစေတီ (သန္တိ၊ သျန္တိ၊ ဆန်ချီ) ဆန်ချီ ဆန်ချီ ဆန်ချီ ဟူသောအမည်သည် တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကို ထိုးဖောက် အထက်ဘဝဂ်သို့ပင် ရောက်ခဲ့လေပြီတည်း။
ကောင်းကင်ဝယ် ငှက်တို့သည် အတောင်သာလျှင် ဝန်ရှိကြပြီး သစ်ပင်တို့၌ မတွယ်မငြိ ပျံသွားကြလေသည်။ ရှင်မဟိန္ဒသည်လည်း မယ်တော်ကြီးနှင့် ရွှေကျောင်းတော်ကြီးကို ကျောခိုင်းလျှက် တူတော်မောင်ကိုရင်သုမနကို ပစ္ဆာသမဏပြုခါ သီဟိုရ်ပြည်ရှိရာသို့ ကြွမြန်းခဲ့လေသည်။ မယ်တော်ကြီးသည် သားတော် မြေးတော်များ တိုင်းတစ်ပါးသို့ ထွက်ခွါသွားသော်လည်း သမီးတော် သင်္ဃမိတ္တထေရီ ရှိသေးသည်ဟု အားတင်းလျှက် မျက်ရည် မကျအောင် ထိန်းနိုင်ခဲ့လေသည်။ နောင်တစ်ချိန် သမီးတော်သည်လည်း သီဟိုရ်သို့ ကြွသွားမည်ကို ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပါမူ - - - - - သို့သော် သားတော်နှင့် မြေးတော်တို့၏ ပုံရိပ်တို့သည်ကား - - - - တစ်ဖြေးဖြေဖြင့် ဝေးရာသို့ ရွှေ့လျှားသွားလေပြီ။ ။
= - -= - - = - =
ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့၏ အနန္တဂုဏ်ကို အစဉ်သတိရ ဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက်
ပူနေး ဝိဒယ ဝိဟာရ်
ရဟန်းသက် (၁၅) ဝါပြည့် အမှတ်တရ
Posted by SITAGU MDY at 12:57 AM No comments: ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်-->>
ဂိုဏ်း ပါတီစိတ် မထာသင့်
အနာဂတ်သာသနာရေး အပိုင်း(၁၄၄) ဂိုဏ်း ပါတီစိတ် မထားသင့်
ဂိုဏ်း ပါတီစိတ် မထားသင့်
တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်သာသနာလုံး တစ်နယ် တစ်မြို့ တစ်ရွာလုံးစသော အများအကျိုး ဆောင်သူတို့သည်- အများနှင့် ဆိုင်သော အလုပ်၌ ဂိုဏ်းစိတ် ပါတီစိတ်စသော သံယောဇဉ် ခင်တွယ်စိတ်များ မထားသင့်ပါ၊
ရှင်းပြပါဦးမည်၊ သံဃာတော်ပိုင်း၌ ဂိုဏ်းချင်း, တိုက်တာချင်း, ကျောင်းချင်း ခွဲခြား၍ စိတ်ထားမှု,
လူဝတ်ကြောင်ပိုင်း၌ ပါတီခွဲခြား၍ စိတ်ထားမှုသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောစိတ်, မေတ္တာကရုဏာ ပျံ့နှံ့ဖို့ရာ နယ်ကျဉ်းသော, ဣဿာ မစ္ဆရိယ တိုးပွားစေသောစိတ်သာ ဖြစ်၏၊
ထိုစိတ်မျိုး ရှိနေသူသည် “အများကြီးပွားအောင် ဆောင်ရွက်ပါသည်”ဟု နှုတ်က ပြောသော်လည်း အလုပ် သဘောမှာမူ မိမိဆိုင်ရာ ကြီးပွားမှုကိုသာ ပြုလျက်ရှိတတ်၏၊ ထိုသူ့သန္တာန်မှာ အခြား ဂိုဏ်းပါတီ၏ ကြီးပွားမှုကို ၀န်တိုသော မစ္ဆရိယနှင့် တကယ်ကြီးပွားပြန်လျှင် မနာလိုသော ဣဿလည်း ဖြစ်တော့မည်သာ။
ထိုအခါ အခြားဂုဏ်းပါတီကလည်း မိမိဂိုဏ်းပါတီအပေါ်၌ ဣဿာ မစ္ဆရိယ ဖြစ်ဦးမည်သာ၊ သို့ဖြစ်လျှင် တစ်နိုင်ငံလုံးကိုလည်းကောင်း, တစ်သာသနာလုံးကိုလည်းကောင်း ဣဿာ မစ္ဆရိယတွေ လွှမ်းဖုံးကာ ကြီးပွားမှု၏ အန္တရာယ်ကြီးသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်၊ ဤ နေရာဝယ် သက္ကပဥှသုတ်တော်လာ ဗုဒ္ဓနှင့် သိကြား၏ အမေး အဖြေကို မှတ်သားသင့်ပါသည်။
သိကြား ။ ။ နတ်ရော လူပါ များစွာသောသတ္တ၀ါတို့သည် ရန်မရှိ ဒဏ်မရှိ ဒေါသမရှိ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ဖို့ရန် ရည်သန် တောင့်တကြပါလျက် အဘယ့်ကြောင့် တောင့်တသလို မဖြစ်ဘဲ အန္တရာယ်ဘေးဒဏ် ရန်မာန်တွေနှင့် နေကြရပါသနည်းဘုရား။
ဗုဒ္ဓ ။ ။ ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုသော ဣဿာ, ကိုယ်ကောင်း စားသလို သူတစ်ပါး မကောင်းစားလိုသော မစ္ဆရိယ ဤတရားနှစ်ပါးသည် သတ္တ၀ါတို့ သန္တာန်၌ စွဲကပ်လျက်ရှိ၏၊ ထိုတရားနှစ်ပါးကြောင့်
ဖြစ်ချင်သလို မဖြစ်ရဘဲ မဖြစ်လိုတာ ဖြစ်နေကြရသည်။
သိကြား ။ ။ ထိုတရားနှစ်ပါးသည် ဘေးရန်များ၍ မကြီးပွားစေ နိုင်သောတရား ဖြစ်ပါလျက် အဘယ့်ကြောင့် (မြွေပွေးကို ခါးပိုက် ပိုက်ထားသကဲ့သို့) မိမိတို့သန္တာန်မှာ အဖြစ်ခံ၍ နေကြပါသနည်းဘုရား။
ဗုဒ္ဓ ။ ။ချစ်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အသင်းအပင်း ဥစ္စာ, မချစ်အပ် သော ပုဂ္ဂိုလ်အသင်းအပင်း ဥစ္စာဟု ခွဲခြားထားမှုကြောင့် ဣဿာ မစ္ဆရိယ တရားနှစ်ပါး ဖြစ်နေကြရသည်။
မှတ်ချက်။ ။ အချစ်ဂိုဏ်းပါတီ အမုန်းဂိုဏ်းပါတီဟု မညီမမျှ ခွဲခြားမှုကြောင့် အချစ်ဘက်၏ တိုးတက်မှုကိုသာ လိုလား၍ အမုန်းဘက်၏ တိုးတက်မှုကို မလိုလားသော ဣဿာ မစ္ဆရိယနှစ်ပါး ဖြစ်ရသည်၊ အချစ်ဘက်၏ ကောင်းကျိုးကိုသာ ရွက်ဆောင်၍ အမုန်းဘက်၏ ဆိုးကျိုးကိုသာ ရွက်ဆောင်ကြသောကြောင့်လည်း အန္တရာယ်ဘေးဒဏ် ရန်မာန်များစွာဖြစ်၍ ဆဲရဲဒုက္ခဖြင့် ပျက်စီး ဆုတ်ယုတ် ကြရသည်၊ ယခုခေတ်၌ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်တို့ ခေါင်းဆောင်သော တိုင်းပြည်အုပ်စုက တစ်ဖက်, ရုရှား ခေါင်းဆောင်သော တိုင်းပြည်အုပ်စုက တစ်ဖက် ကွဲပြား ပုံကို ကြည့်ပါ။
(ရနံစံအိမ် ဘလောမှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
Posted by SITAGU MDY at 11:57 PM No comments: ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်-->>
Labels: ဆုံးမစာ/ ဆုံးမစကား
နမော တေ ဗုဒ္ဓ ဝီရတ္ထု
ကျွနုပ်၏ အတို အထွာကြီးများ (75)
ငယ်စဉ်က သံစဉ်များ (17)
စာဟောင်း ပေဟောင်း ဖတ်ဖို့ကောင်း (3)
ဆုံးမစာ/ ဆုံးမစကား (6)
တက်လမ်း နှင့် လက်တမ်းကဗျာများ (5)
ဒိုတာဝန်း အရေးလေးပါး (1)
မန်းသီတဂူ ရေးရာ (8)
သီတဂူ ပဉ္စမ စီမံကိန်း (1)
သီတဂူ ဘဝပုံရိပ် (4)
သုတ္တန်တို့၏ အနှစ်သာရ (2)
အဆို အမိန့်များ (43)
နေ့ထူး နေ့မြတ်များ (7)
Download Flash Player (IE) from FileHippo.com
မူဆယ်-ပန်ဆိုင်း လမ်းပေါ်က ကျေးရွာမှာ မိုင်းနှစ်လုံး ပေါက်ကွဲ - ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်တောင်းကျေးရွာမှာ ၂၀၁၈၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က မိုင်း ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူတစ်ဦးကို မူဆယ်ဆေးရုံတွင် တွေ့ရစဉ် ။ ဓါတ်ပုံ - ဦး...
Just about essentially the most Definitely Brushed aside Programs and companies for Some sample Description Study Items of paper - Necessary Parts of Some sample Description Scientific scientific tests Newspaper There go on for being some duties you have to know as it comes to dealing ...
ashinayupala - YouTube
VTS 01 1 - VTS 01 1 The Heart of Myanmar 1, Sitagu Sayadaw မြန်မာ့ နှလုံးသား၊ သီတဂူဆရာတော်. From: Ashin Ayupala Views: 180ratings Time: 16:54 More in Nonprofits & ...
လိုက်ဖက်တဲ့ဘ၀ - YouTube
casino swiss | Forex amiga | 7sultanscasino | Website Counter | ONLINE CASINO IN SOUTH AFRICA
Ashin Ayupala Create Your Badge